के तपाईं मलाई शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरू देखाउन सक्नुहुन्छ सुरक्षित भुक्तानी लिङ्क सुरक्षित गर्न?
हो, म तपाईंलाई शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साईटहरू देखाउन सक्दिन कि कम संभावनाहरु संग Google को साथ रातो झण्डा बढाउन को लागी गुणवत्ता लिङ्कहरू खरीद गर्न।. वास्तवमा, प्राकृतिक लिंक निर्माणको जैविक प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण भन्दा बढी छ. मेरो मतलब वेबमास्टरहरू र व्यावसायिक एसईओहरू भर्खरै पुष्टि भएका छन् कि हरेक वेबसाइटको दर्जा सामान्यतया साइटमा अनुकूलनसँग मात्र गरिन्छ जुन लगभग 10%. एकै समयमा, अनलाईन प्रवर्द्धनमा बाँकी प्रगति वेबसाइटको मुख्य लिङ्क प्रोफाइलमा निर्भर छ, गुणस्तरको सम्बन्धमा ब्याकलिंकको सन्दर्भमा, र तिनीहरूको मात्रा. केवल यो मनमा राख्नुहोस् - तपाईको वेबसाइटमा वा प्रत्येक इनबाउन्ड लिङ्क राख्नुहोस् वास्तवमा Google द्वारा विचार गरिएको अर्को "मतदान" को साथ साथै साथमा अन्य प्रमुख खोज ईन्जिनियरिङ्का लागि यो सही रैंकिंग स्थानको उपज गर्दा आउँदछ SERP हरूको सूची.
नोट, तथापि, कि ब्याकलिङ्कहरू आफैले प्रतिनिधित्व गर्ने कुशल र लाभदायक तरिका भन्दा बढीको रूपमा तपाईंको वेबसाइटको वर्तमान रैंकिंग पोष्टलाई कम समयमा सुधार गर्नका लागी।. तर तपाईले आफ्नो समय र प्रयासको लागि माथि 10 पछाडि शीर्ष लिंक साइटहरू देखाउनु अघि, चलो यसलाई सामना गरौं - ठीकसँग लिंकहरू खरीद र सही उद्देश्यका लागि सबै सही हुनेछ।. यद्यपि, सम्पूर्ण कामले पनि लाभ उठाउन सट्टा अझ हानिकारक साबित हुन सक्छ. त्यसकारण म उनीहरूलाई विशेष हेरविचारको साथ सुझाव दिन्छु र बाँच्नु अघि तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा प्रत्येक लिङ्कको लागि दुई पटक जाँच गर्न सुझाव दिन्छु. र कि भुक्तानी लिङ्क लिङ्कहरू पनि थोकमा वा लिंक स्टिकहरूबाट भन्न चाहँदैनन् (i. ई. , अनलाइन प्लेटफार्म र लिंक एक्सचेंजको लागि साइटहरू, साथसाथै कुनै अन्य सस्तो लिङ्क उत्पन्न सेवाहरू जुन सामान्यतया स्पाइडिंग टोनको कम-गुणस्तर ब्याकलिङ्कका लागि प्रयोग गरिन्छ, यसको लगभग एक-अर्का तरिकामा). त्यसैले, सम्झनुहोस् कि तपाईले अर्को भुक्तानी लिङ्क प्राप्त गर्नु अघि उचित अनुसन्धान चलाउन पर्याप्त समयको निवेश गर्नु पर्छ - ती शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरूबाट पनि. पछि, इन्टरनेटमा अन्य लिङ्कहरू खरीद गर्न बाहिर हिँड्न सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक र जोखिमपूर्ण उपक्रम हो.
शीर्ष 10 बैङ्कलिङ्क साइटहरु लिंक को लागि उचित भुगतान
लिंक प्रबंधन - पहिलो स्थान हो जुन म तपाईंलाई भेटिन्छ. किनभने किनकि मैले आफ्नो आला वेबसाइटमा ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न आफ्नो सेवाहरू प्रयोग गरें र लगभग सबै चीजहरू सजिलो, विश्वसनीय, र सुरक्षित पाए. लिङ्क व्यवस्थापनले बिडिंग मनोरञ्जन गर्दैन, त्यसैले तपाइँ सँधै उचित शुल्कको लागि राम्रो पेजरैंक ब्याकलिङ्कहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, तलको मूल्य यहाँ एक डलरको साथ सुरु हुन्छ.
पोस्ट लिङ्कहरू - सुरक्षित सम्झौता गर्नका लागि शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरूमा मेरो दोस्रो स्रोत फेला पर्यो।. यस प्लेटफर्मको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्षहरूमध्ये, तपाईं सजिलै संग यसलाई तत्काल $49 भुक्तानी तिर्न सक्नुहुन्छ. पोस्ट लिंकहरू तुरुन्तै सही प्रकाशकहरूसँग सम्पर्कमा प्राप्त गर्ने विश्वसनीय तरिका साबित भयो. र त्यहाँ धेरै विज्ञापनदाताहरू छन् त्यहाँ उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू खरीद गर्न राम्रो सौदाहरू खोज्दै. ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईंको वेबसाइट वा ब्लग पर्याप्त राम्रो छ भने, तपाईं आफूलाई प्रकाशकको ​​रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ. एकपटक तपाईंले ताजा, गुणस्तर, र राम्रो-लक्षित सामग्री पाउनुभयो, सबैलाई चाहिन्छ केवल तपाईंको साइट पेश गर्न को लागि. यस तरिका, तपाईं वास्तविक ग्राहकहरु को लागि पैसा बनाउन को लागि वास्तविक backlinks को निर्माण मा शामिल हो रही छ. आखिर, यो सबै व्यवसाय को बारे मा छ, है ना?
बैङ्कलिंक डट COM - यो ब्याकलिङ्कहरू खरीद गर्न विचार गर्ने तेस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय स्थान हो।. यस स्रोतको विशेष विशेषता यो हो कि यसले तपाईंलाई उच्च PR डोमेनहरूमा उपलब्ध उपलब्ध प्रस्तावहरूको एकदम विस्तृत सूची प्रदान गर्न सक्छ जुन उच्च डोमेन डोमेनको साथ उपलब्ध छ, र अन्य तेस्रो-पक्षका वेबसाईटहरू वा मुख्यालय ब्याकलिङ्कका लागि भुक्तानीको लायक ठूलो मात्रामा राम्रो. अझ बढी छ - ब्याकलिङ्कहरू डट कम केहि अतिरिक्त बहुमूल्य लिङ्कहरू हट्ने ठूला र प्रयोग योग्य स्थान हो र तपाईंको वर्तमान स्तरवृद्धि पनि बढाउनुहोस्।. यसको अलावा, सबैभन्दा लोकप्रिय ज्ञात भुक्तानी लिङ्क प्रदायक मध्ये कुनै पनि आला वेबसाइट को लागी जानिन्छ, तपाईं शायद शीर्ष 10 बैकलिंक साइटहरु मध्ये सबै भन्दा आसान खरीद प्रक्रिया को आनंद ले सकते हो - क्रेडिट कार्ड संग एक सफल भुगतान को लागी स्वतंत्र हो, या केवल आफ्नो व्यक्तिगत पेपैल खाता को उपयोग गरेर.
ब्ल्याक-ह्याट एसईओ उपकरण हो जुन तपाईलाई आवश्यक लगभग कुनै पनि लिंक दिन सक्छ - उच्च पीआर, वेब 2.0उपलब्ध, बलियो डोमेन युग, र प्राधिकरण, साथसाथै धेरै फरक सामाजिक संकेतहरू, र अझ बढी. तपाईले पहिले नै अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ, ब्ल्याक ह्याट लिङ्कहरू एक खतरनाक प्रदायक हो जसले ठूलो बल्क प्याकेजहरूमा ब्याकलिङ्कहरू सबैभन्दा कठिन डेरिभिलिभहरूमा बिक्री गर्छ, बरु मात्र एक एकल वा अधिक सावधान वेबमास्टरहरू र अनलाइन व्यवसाय मालिकहरूका लागि सशुल्क लिंकहरूको तुलना गर्नु. अन्य अनूठा विशेषताहरु मा, यस उपकरणले सय पछाडि लिंकहरू वा दुई बारेमा केहि गर्न सक्छ - सजिलै संग एकदम कम मापदण्ड परिणाम प्रदान गर्दछ र एक घण्टा वा त्यहि भित्र भित्र सबै हेर्न मिल्छ. तल्लो लाइन - यो उपकरण केवल यदि तपाईं एसईओ मा कुशल हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस् र ब्ल्याक-ह्याट एसईओको प्रयोग र अन्य कुनै पनि "कानूनी" ट्रिक्स र कार्य योजनाहरु को लागी वास्तविक जोखिम लिन पर्याप्त बहादुर महसुस गर्नुहोस्।. मैन्युअल रूपमा ब्याकलिंकहरू निर्माण गर्न अर्को राम्रो उपकरण हो।
. निस्सन्देह, होथ सबैभन्दा माथिल्लो विकल्प शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरूको सूचीमा फेला परेन. तर गुणस्तर लिंक व्यवस्थापनको लागि यो अत्यन्त उपयोगी छ, साथै Google को अनुक्रमणिकाको साथ टाउको सुरू गर्दै. यो सफ्टवेयर प्रयास गर्नुहोस् र तपाइँको वेबसाइटको प्रदर्शनमा स्तरवृद्धि गर्नुहोस्. तथापि, तथापि, अघि बढ्नु अघि, तपाइँसँग सबै ठाँउमा निश्चित गर्नुहोस्. म दृढतालाई सिफारिस गर्दछु कि कुनै पनि ठूलो खरीद कार्यबाट टाढा राख्नुहोस्, कम से कम यो लाइभ जान भन्दा पहिले कम्तिमा प्रत्येक लिङ्कमा डबल चेक छ. यो चीज भनेको धेरै जोखिमपूर्ण स्वचालित लिङ्क निर्माण सफ्टवेयर जस्तै हो, यो म्यानुअल उपकरणले तपाइँको वेबसाइट वा ब्लगको लागि पनि समान रूपमा हानिकारक साबित गर्न सक्छ।. यस दुर्भाग्यपूर्ण परिणामलाई रोक्नको लागि, म तपाईंलाई सावधानीपूर्वक कार्य गर्न सिफारिस गर्दछु, विशेष गरी सुरुमा. एक पटक फेरि - प्रायजसो राम्रो पीआर ब्याकलिङ्कहरू सम्भवतः प्राय: कुरा गर्न को लागी स्पोन गर्न बाहिर जान्छ. तर के गर्नु भन्दा उत्तम हुनुपर्छ? कुरा यो कुरा हो कि तपाईलाई यहाँ सबैलाई मात्र साहसी भई अभिनय गर्नदेखि बच्न, जब सम्म तपाई मुख्य सर्च इन्जिनको दृश्यबिन्दुबाट संदिग्ध हेर्न चाहनुहुन्न. कुनै पनि Google द्वारा दण्डित गर्न चाहँदैन, दाँया? त्यसोभए, केवल लगातार क्रमिक कदमको लागि काम गरिरहनुहोस् - एकपटक तपाईंले थाहा पाउनुभयो कि तपाईको मुख्य कुञ्जी शब्दहरूको एक भाग विशेष गरी राम्रो प्रगति हो जसले SERP को माथि बढ्छ, तपाइँ अन्ततः छिटो र अधिक लिङ्कहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ - धीरे-धीरे हिँडिरहन्छ। तपाईंको अन्तिम रैंकिंग लक्ष्य र लगातार तपाईंको वर्तमान स्थिति को ब्याकलिंक विश्लेषण उपकरण संग निगरानी.
फोवर - अर्को लोकप्रिय उपकरण एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली अनुसूचीमा लिङ्क निर्माण सेवा प्रदान गर्दछ।. ध्यान राख्नुहोस् कि त्यो कुनै पनि लिङ्क-जेनेरेट उपकरण जस्तो छ, फिभरर खतरनाक स्थान हुन सक्छ - त्यसैले हेर्नुहोस्! नयाँ भुक्तान गरिएको लिङ्क थप्दा केवल मात्रासँग अधिकृत छैन, र त्यहाँ मात्र अनुभवी र सबै भन्दा विश्वसनीय व्यक्तिसँग सम्झौता गर्न डबल जाँच गर्नुहोस्।.
माथि कार्य - शीर्ष backlink साइटहरु को सूची मा अंततः सुरक्षित स्थान मिलयो. तर सुरक्षा तपाईंलाई सँधै केहि अतिरिक्त नगद खर्च गर्नेछ, ठीक छ? मेरा मतलब छ कि माथि कार्य मुख्य रूप देखि एक कुशल फ्रीलान्स समुदाय संग काम गर्दै छन्. हो, उनीहरुको मूल्य ट्याग कहिलेकाहीँ असीमित रूपमा हुन सक्छ, तर भुक्तानी ब्याकलिङ्कहरूसँग सम्झौता गर्न सेवा अझै सबैभन्दा उचित छ।. यसो गर्नु, तपाई सधैँ कमसेकम के के लागि भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनुहुनेछ.
व्यक्ति प्रति घण्टा - फ्रीलान्सको संसारमा दोस्रो नाम हो. यसको शीर्ष विशेषताहरु मध्ये, यस स्वतंत्र समुदायले उच्च पीआर ब्याकलिंकहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन् जुन उनीहरूको लागि तिर्न चाहने सबैलाई पछ्याउनुहोस्. ती सबै शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरूबाट अपेक्षित परिणामहरू विचार गर्दै (i. ई. , एक वेबसाइट या ब्लग को लागि खोज रैंकिंग स्थिति मा वास्तविक वृद्धि), प्रति घंटा मान्छे को अन्त मा वेब मा कुनै अन्य भन्दा राम्रो काम गर्दैछ. किन? केवल किनकि यो फ्रीलियन समुदायले प्रायः शक्तिशाली ब्याकलिङ्कहरू उपलब्ध गराउन पर्याप्त कुशल छ, मलाई स्वीकार्नुपर्छ. त्यहाँ हजारौँ साँच्चिकै स्मार्ट स्मार्टफोनहरू त्यहाँ फैलिएका छन्। तपाईलाई उच्च उच्च पीआर ब्याकलिङ्कहरू प्रदान गर्न को लागी एक धेरै उच्च प्राधिकरण र पेजरैंक जस्तै विभिन्न स्रोतबाट आउँदछ, जस्तै HuffPost, आईबीएम, अर्को वेब, र धेरै अन्य नामहरू संसारका दिग्गजहरूको हामी राम्ररी चिनिन्छौं.
उच्च गुणवत्ता ब्याकलिङ्क डट कम किन्नुहोस् - तपाईंको वेबसाइट वा ब्लग को Google को SERPs को शीर्ष मा चढने को लागी सबै भन्दा उपयुक्त स्थान को लागी जानिन्छ। - एक रकेट जस्तै. उद्योगमा 15 वर्ष भन्दा बढी एसईओ र वेबमास्टरहरूको तिनीहरूको शीर्ष-ज्ञाने टोलीले वास्तवमा प्रभावकारी रैंकिंग पदोन्नति प्रदान गर्न सक्छ।.
ब्याकलिंक रकेट - न केवल शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरु मा छ, तर एसईओ प्रदाता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को. तपाईं भुक्तानी प्याकेजहरूको उचित विविधता प्रदान गर्न $ 59 देखि शुरू हुने सौ डलर सम्म, ब्याकलिंक रकेटले बिक्रीको लागि द्रुत-मस्ती-प्रदान डट EDU ब्याकलिंकमा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ।. केही मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि एक शैक्षिक लिङ्क 100 साधारण भन्दा राम्रो छ.
लिङ्क व्हील प्रो - अतिरिक्त फीचर विकल्प हो, जुन मेरो शीर्ष 10 ब्याकलिङ्क साइटहरूमा सूचीबद्ध हुन सक्दैन।. निस्सन्देह, त्यो ठाउँ सम्भवतः खतरनाक छ किनकी यसले मुख्य रूपमा लिंक एक्सचेंजहरू र केही अन्य पूर्ण रूपमा विश्वसनीय सम्झौताहरूमा आधारित ब्याकलिङ्कको ठूलो रकम प्राप्त गर्न सुझाव दिन्छ।. वैसे पनि, बहुमूल्य शैक्षिक र पनि सरकारी backlinks को पेशकश, लिंक व्हील प्रो जुबा को लागि धेरै आकर्षक आकर्षक लग रहेको छ, छ ना? आखिर, एक ठूलो खेलले पनि ठूलो जोखिम लिने मतलब छ. यद्यपि, यो अझै पनि तपाईं निर्णय गर्नको लागि मात्र छ Source .